बैतडीका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित, अस्पतालको सेवा ठप्प – रेडियो साथी एफएम ९५ मेगाहर्ज
२४ जेठ, बैतडी । जिल्ला अस्पताल बैतडीको आजदेखि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीलाई आइतबार अपराह्न अभद्र व्यवहार गर्दै कालोमोसो दलेको घटनाको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालको सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका हुन् ।
सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा नभएको भन्दै जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकृत भुवन जोशीले बताए । उनले भने, ‘ड्युटीमा रहेका डाक्टरमाथि दुर्व्यवहार भएको छ । दोषीमाथि कारबाही नहुँदासम्म सेवा ठप्प पारिनेछ ।’
यस्तै, डा. अवस्थीमाथि भएको अभद्र व्यवहारको विरोध गर्दै सोमबार स्वास्थ्यकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नारा जुलुस गरेका छन् ।
पेटमा सात महिनाका तीन बच्चा रहेको अवस्थामा हातखुट्टा सुन्निएर हिँड्डुल गर्न नसक्दा शनिबार जिल्ला अस्पताल बैतडीमा पुर्याइएकी दशरथचन्द नगरपालिका–१ बल्लेककी २४ वर्षीया हिरा भुलको जिल्लामा उपचार हुन नसकेर कैलाली रिफर गर्नुपर्दा डा. अवस्थीले एम्बुलेन्स उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएर आइतबार कालोमोसो दलिएको थियोे ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी हिरालाई असजिलो भएका बेला अस्पतालले आइतबार कैलाली रिफर गरेको तर एम्बुलेन्स नपाएको आक्रोशमा आफन्त तथा गाउँले महिलाले डा. अवस्थीलाई कालोमोसो दलेको बताइएको छ ।
जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. अवस्थीका अनुसार आफू आइतबार अस्पतालमै रहेका बेला समूहमा आएका महिलाले एक्कासि आफूमाथि कालोमोसो दलेको बताए । उनले भने, ‘बिना गल्ती मलाई कालोमोसो दलिएको छ । कारबाहीका लागि अब कानुनी प्रक्रियामा जान्छु ।’
बिरामी महिला रिफरका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था आफूले नै गरेर कैलाली पठाएको डा. अवस्थीको भनाइ छ । ‘गर्भवती महिलाको पेटमा तीन ओटा बच्चा थियो,’ उनले भने, ‘पेटमा पानी जमेको थियो । एउटा बच्चाको अवस्था सामान्य थिएन ।’
कालोमोसो दल्ने पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
Previous: सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालको ताला खोलियो
Next: राजापुरको खानेपानीलाई व्यवस्थीत बनाइने